Maung Ba Kaung: May 2009
ဒီရက်ပိုင်းမှာ အလုပ်များပုံက ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုအချိန်တွေ ပျောက်ဆုံးကုန်မှန်းမသိဘူး။ ကိုယ်ဖတ်နေကျ ဟိုဟိုဒီဒီ စာတိုပေစတွေနဲ့ ဝတ္ထုဖတ်တဲ့ အချိန်ကလည်း ရေချိုးခန်း ဝင်တဲ့ အချိန်လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်။ နောက်ပြီး ညွှန့်စံရဲ့ အနောက်တိုင်း စာပေယဉ်ကျေးမှု ဒေါက်တာဘွဲ့အတွက် စာတွေ ကူဖတ်ပေးပြီး စာတမ်းပြုစုဖို့ကလည်း ရှိသေးတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ဆိုတော့လည်း အပျင်းကြီးနေလို့ မဖြစ်ချေဘူး။ ကိုအောင်မိုးဝင်းရဲ့ အင်တာနက်သတင်း မီဒီယာ ဝက်ဆိုဒ်ကို ဖန်တီးပေးဖို့ကလည်း လုပ်လက်စ။ အဲဒါကလည်း ရပ်ထားလို့ မဖြစ်ပြန်ဘူး။ အဲဒီကြားထဲမှာ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက လုပ်ချင်နေခဲ့တဲ့၊ လုပ်ဖို့လည်း ရည်မှန်းချက်တွေ ထားခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတွေပေါ့။စွန့်ဦး စီးပွားတည်ထွင်သူ ဖြစ်ဖို့အတွက် အယူအဆအသစ်တွေနဲ့ ကြံဆပြီး အစပျိုးနေရတုံး။ ဘဝရပ်တည်နေရေးအတွက် အလုပ်ကို တာဝန်ကျေပွန်အောင် လုပ်ရတဲ့ အချိန်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာသန်စွမ်းရေးအတွက် အားကစားလုပ်ရတဲ့ အချိန်၊ သာယာတဲ့အိမ်ထောင် အတွက် အတူတကွ ဖန်တီးရမယ့် အချိန်၊ အဲဒါတွေကို နုတ်လိုက်ပြီးတော့မှ ကျန်တဲ့ အချိန်လေးထဲမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ရတော့မှာ။ ဒီတော့ ဘလော့မှာစာရေးဖို့အချိန် တစ်နာရီလောက် ရဖို့ အချိန်ကို တစ်ခါပြန်ပြီး စီမံခန့်ခွဲရတယ်။ အိပ်မက်တွေထဲမှာတော့ စာလုံးတွေ၊ စကားလုံးတွေက အတောင်ပံတွေပေါက်လို့ ဟိုဟိုဒီဒီ ဝဲပျံနေကြတာ လိုက်ဖမ်းလို့ကို မမိနိုင်ဘူး။
အဲဒီတော့ ဗဟုသုတရဖို့ အလို့ငှာ အစုရှယ်ယာ(stock)အကြောင်းလေး တီးမိခေါက်မိကြရအောင် နည်းနည်းပါးပါးလေး ရေးလိုက်အုံးမယ်။ စာကလည်း မရေးတာ ကြာပြီဆိုတော့ လောလောဆယ် ဖတ်စရာလေး တစ်ခုဖြစ်သွားအောင်လို့ပါ။ ကိုယ်က ဘောဂဗေဒကို အထူးပြုလေ့လာလိုက်စားခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး ကိုယ်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ဘဝကလည်း နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးကို ဝင်ဆံ့ဖို့ မဆိုထားနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ဈေးကွက်ကို တောင် မကပ်နိုင်ဘူး။ ဘုရားပွဲဈေးတွေမှာ ဆိုင်ခင်းပြီး လေးဘေးထည် ရောင်းခဲ့ရတဲ့ စီးပွားရေးလောက်ပဲအကျွမ်းတဝင်ရှိတယ်။ ဟဲ..ဟဲ..ပိုက်ဆံ ငါးကျပ် တစ်ဆယ် မြတ်ဖို့ အားပေါက်အောင် ရောင်းရတဲ့ အရောင်းဈေးသည်မျိုးပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်တုန်းက မေမြို့ ညမ်တောဈေးပွဲမှာ ဈေးရောင်းနေတဲ့ ဘကောင်းကို တွေ့ဖူးကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ အခုလို နိုင်ငံတကာ အစုရှယ်ယာ အကြောင်းရေးတဲ့အခါ လက်ရှိ အတွေ့အကြုံကိုပဲ အခြေခံပြီး ရေးရမှာဆိုတော့ ပညာရှင်တွေလို သီအိုတွေ လှိုင်နေအောင် မသုံးပဲ၊ လက်တွေကြတဲ့ ဘက်ကပဲ ချဉ်းကပ်ပြီးရေးမယ်။
လူငယ်တွေ နိုင်ငံတကာကို ချေဦးလှည့်ကျတော့မယ်ဆိုရင် ရိုးရိုးကျင့် မြင့်မြင့်ကြံဆိုတဲ့ စိတ်ထားကို ထားဖို့ အလွန်တရာ အရေးကြီးတယ်။ ရိုးရိုးကျင့်ဖို့ အတွက် စာရိတ္တကောင်းတွေရှိဖို့ လိုတယ်။ နိုင်ငံကြီးသား စိတ်ထားတွေ ထားတတ်ဖို့လိုတယ်။ နိုင်ငံတကာက အဆင့်အတန်းမြင့်မားတွေ စာကောင်းပေကောင်းတွေဖို့ ရှာဖွေလေ့လာပြီး နိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုမှာ ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဝင်ရောင် ယှဉ်ပြိုင်ကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ မြင့်မြင့်ကြံကြပြီဟေ့လို့ ဆိုလိုက်ရင်လည်း နိုင်ငံတကာမှာ ကိုယ်က အခိုင်းခံဖို့ သွားတာထက် ကိုယ်က သူများကို ခိုင်ဖို့၊ ကိုယ်က သူများကို အုပ်စိုးဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်နဲ့ ပြင်ဆင်ကြရမယ်။ ကိုယ့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ လက်နက်ကိရိယာ တွေကို တတ်ဆင်ရမှာပေါ့။ ဘာသာစကားတွေ တစ်မျိုးမက ပြောတတ်ဆိုတတ်အောင် လေ့လာ၊ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာ၊စကားပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာကို တဖက်ကမ်းခပ်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ပညာရပ် အပေါ်မှ ယောင်တိယောင်ဝါးဖြစ်နေပြီလို့ ထင်ရင် ထပ်ပြီး ကြိုးစား။ ဘယ်လောက်အထိ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ဖို့ လိုသလဲဆို တရေးနိုး ထမေး…အဖြေရှိတယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်မျိုးပေါ့။ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ပညာရပ်အပေါ်မှာ ကျွမ်းကျင်ပြီဟေ့လို့ ယုံကြည်မှုရှိလာရင် ခေါင်ဆောင်မှုပညာတွေ၊ စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်မှုပညာတွေကို၊ စွန့်ဦး စီးပွားတည်ထွင်မှု တွေအကြောင်း လေ့လာ။ ဒီလိုနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာတွေ နေရာယူလာကြရင် နောက်တက်လာမယ့် လူငယ်တွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေရမယ်။ တိုင်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ကြတဲ့အခါ အဲဒီလို လူတွေက မရှိမဖြစ် လိုလာကြမှာပေါ့။
စာရေးသူ ကိုယ်တိုင်က ငယ်ငယ်ကတည်းက အလုပ်အရမ်းလုပ်ချင်တာ။ ဘာအလုပ်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ချင်တာပဲ။ အဖေသုံးဘီးကား မောင်းတော့ ကားနောက်လိုက်တဲ့ စပယ်ယာ လုပ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက အဖေ့သုံးဘီးကားက ရုံတော်ကြီးမှာ ဂိတ်ထိုးတာ။ ညနေကားသိမ်းပြီဆိုရင် ဈေးချိုကနေ ဘုရားကြီးကို တစ်ယောက်နှစ်ကျပ်နဲ့ လူခေါ်ပြီး ကားဆွဲတယ်။ နောက် နည်းနည်းကြီးလာတော့ လေဘေးထည် ရောင်းတယ်။ နောက် ဈေးချိုတိုက်တန်းက ဖိနပ်ဆိုင်မှာ ဖိနပ်ရောင်းတယ်။(အားတဲ့ အခါများကြတော့ အဲဒီ ဈေးချိုတိုက်တန်းမှာ ဖိနပ်ရောင်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံလေး ရေးရမှာပေါ့။) အဲဒီ ဖိနပ်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တုန်းက ရတဲ့ လခက တစ်ခ သုံးထောင်။ အဲဒီ ပိုက်ဆံကို စုပြီး ရေဒီယို ကက်ဆက် ပြုပြင်သင်တန်းတက်။ပြီးတော့ အိမ်မှာ “တန်” ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ရေဒီယို၊ ကက်ဆက်ပြင်ဆိုင် ဖွင့်တယ်။ မအောင်မြင်ဘူး။ နည်းနည်းပါးပါးလေးပဲ ပြင်လိုက်ရတယ်။ “တန်” ဆိုတဲ့ နာမည်က စာရေးသူ တရုတ်စာ၊ စကားကို လေ့လာတုန်းက ရလာတဲ့ တရုတ်စာလုံးတစ်လုံးရဲ့ အသံထွက်ပါ။ နောက် တက္ကသိုလ်တက်ရတော့ အဲဒါတွေ ရပ်သွားတယ်။ တက္ကသိုလ် သုံးတန်ပြီးတော့ အလုပ်က လုပ်ချင်လာပြန်ရော။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ လူတွေက တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်အစုရှယ်ယာတွေ စပ်ပြီး ကုမ္ပဏီတွေ ထောင်တော့ အားကျတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် ပညာက မပြည့်စုံသေးဘူး။ ငွေးကြေးက မရှိသေးဘူး။ ဒီတော့ ရန်ကုန်မှာနေပြီ အိမ်တွေကိုလိုက် ကွန်ပျုတာပြင်တယ်။ ဒီတော့ လူတွေ အကြောင်းပိုသိလာရတာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်က အစုရှယ်ယာတွေ ထည့်နိုင်တဲ့ အနေအထားမရှိတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမရဘူး။ ကိုယ့် အရည်အချင်းတွေကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဆူးကလေး တစ်ချောင်း ပေါက်လာပြီး တေးထားရတော့တာပေါ့။
နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ စာရေးသူ နိုင်ငံတကာကို ခြေဆန့်တော့ အစုရှယ်ယာ(stock)တွေဆိုတာ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရတယ် ရောင်းလို့ တယ်ဆိုတဲ့ အမြင်တွေရှိလာတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေ ဘယ်လို ထူထောင်ရမယ်။ အတွေးအခေါ် အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် စွန့်စားဦးဆောင်ပြီး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့(entrepreneurship) လမ်းစ အမြင်တွေ တွေ့ရှိလာတယ်။ စွန့်ဦး စီးပွားလုပ်ဆောင်မည့်သူ(entrepreneur) တစ်ယောက်ဟာ ဈေးကွက်မှာ မရှိသေးတဲ့ အတွေးအခေါ် အကြံဥာဏ်ရှိရင် အဲဒီ အကြံဥာဏ်ကို အကောင်းအထည်ဖေါ်ဖို့ ပညာရှင်နဲ့ ငွေကြေးအရင်းအနှီး တွေလိုလာတယ်။ အဲဒါတွေကို ရအောင် ချဉ်းကပ် စည်းရုံးရတာ သူ့ရဲ့ ပညာပဲ။ Microsoft ၊ Google ၊Youtube အစရှိတဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ အကြံဥာဏ် အတွေးအခေါ်ကောင်းက စခဲ့ကြတာပဲ။ သူတို့ဟာ ကျောထောက်နောက်ခံ ငွေကြေး အထောက်အပံပေးမယ့် သူတွေကို ချဉ်းကပ်ပြီး လုပ်ငန်းတွေကို စခဲ့ကြတယ်။ နောက်တော့ ငွေကြေး အရင်းအနှီးကို ပိုပြီး ကြီးမား လာအောင်လို့ အများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အစုရှယ်ယာ အဖြစ် ဖွင့်ပေးလိုက်တော့ လူတိုင်းလူတိုင်း အစုရှယ်ယာတွေ ဝယ်လို့ ရလာတောပေါ့။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပစ္စည်းတစ်ခုကို တီထွင်ဖန်တီးလိုက်ပြီး ဈေးကွက်မှာ ဝင်တဲ့ အခါ အဲဒီ ပစ္စည်းအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ လူတွေက အစုရှယ်ယာတွေ ဝယ်ပြီး ရင်းနှီးမြုတ်နှံကြတယ်။ ဥပမာ ကုမ္ပဏီက အရင်းအနှီး ၁၀၀၀-ကျပ်လောက် လိုတယ် ဆိုကြပါစို့။ ဒီတော့ အစုရှယ်ယာ တစ်ခုကို ၁-ကျပ်နဲ့ အခုတစ်ထောင် ရောင်းမယ်။ နောက်တော့ ကုမ္ပဏီက အောင်မြင်မှုရှိလာပြီး အမြတ်တွေရလာတဲ့ အခါ အစုရှယ်ယာတွေရဲ့ တန်ဖိုးလည်း တက်သွားမယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတကာမှာ အစုရှယ်ယာတွေကို ရောင်းဖို့၊ ဝယ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲလို့ မေးစရာရှိလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဈေးဝယ်စရာရှိရင် ဈေးကို သွားပြီး ဈေးဝယ်ရတယ်။အဲဒီလိုပဲ အစုရှယ်ယာတွေကို ဝယ်ချင်ရင် အစုရှယ်ယာဈေးကွက်(stock market)မှာ ဝယ်ရတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အမြောက်အမြား ရှိနေတဲ့အတွက် အစုရှယ်ယာဈေးကွက်မှာလည်း လူတကာ ဝယ်လို့ ရအောင် အစုရှယ်ယာတွေ ဖွင့်ပြီးရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီ ကုမ္ပဏီတွေ ရဲ့ တိုးတက်အောင်မြင်မှု အခြေအနေတွေကို ကြည့်ပြီး အစုရှယ်ယာတွေကို ဝယ်ယူသူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဝယ်ထားတဲ့ အစုရှယ်ယာတွေကို ပြန်လည် ရောင်းချလိုတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အစုရှယ်ယာ ဝယ်လိုသူတွေ၊ ရောင်လိုသူတွေနဲ့ နေ့စဉ် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဈေးကွက်ကို အစုရှယ်ယာဈေးကွက်လို့ ခေါ်ရမှာပေါ့။ ဝယ်လိုသူနဲ့ ရောင်းလိုသူတို့ရဲ့ အစုရှယ်ယာတွေ ချိတ်ဆက်ပေးရတာကို stock exchange လို့လည်း ခေါ်တယ်။ Nasdaq, New York Stock Exchange (NYSE) တို့ ဆိုတာတွေက အမေရိက အစုရှယ်ယာဈေးကွက်ရဲ့ exchange တွေပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီအစုရှယ်ယာဈေးကွက်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကျောက်မြောင်းဈေး၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးတွေလို လူကိုယ်တိုင်သွားပြီး ကျွန်တော် ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ အစုရှယ်ယာ ဘယ်လောက်ဖိုး ဝယ်ချင်ပါတယ်လို့ ပြောပြီး ဝယ်လို့ မရဘူး။ ကြားထဲမှာ ရောင်းခွင့် ဝယ်ခွင့်ရှိထားတဲ့ ပွဲစား(broker) တွေပဲ ဒီ exchange တွေမှာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ပေးကြရတယ်။
ဝယ်လိုသူက ပွဲစား(broker) နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အဲဒီ ပွဲစားဆီမှာပဲ ကိုယ်ပိုင် စာရင်း(account) တစ်ခု ဖွင့်ရတယ်။ ပြီးတော့မှ ကိုယ်ဝယ်ယူလိုတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အစုရှယ်ယာ အရေအတွက်ကို ပွဲစားကိုပြောလိုက်တော့မှ ပွဲစားကတဆင့် သူရဲ့ အချိတ်အဆက်နဲ့ Nasdaq, NYSE တို့မှာ ဝယ်ယူလိုတဲ့ အစုရှယ်ယာအရေအတွက်ကို တင်ပြပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါ Nasdaq, NYSE အစရှိတဲ့ stock exchange တွေက ဝယ်လိုသူတောင်းဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အစုရှယ်ယာ ရောင်းလိုအားကို ရှာရတယ်။ ရောင်းလိုသူနဲ့ ဝယ်လိုသူ တွေ့ရင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီ။ အစုရှယ်ယာဈေးကွက်မှာတော့ အစုရှယ်ယာတွေက ကုဋေ သန်း ချီပြီး နေ့စဉ် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် stock exchange တွေကနေ အစုရှယ်ယာတွေကို ဝယ်ပေးလိုက်တာက ပွဲစား။ ဒီတော့ အဲဒီ အစုရှယ်ယာတွေက ကြားပွဲစားရဲ့ စာရင်းဇယားနဲ့ပဲ နာမည်ပေါက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ကိုယ်ရဲ့ စာရင်းဇယားက ကြားပွဲစားဆီမှာ နာမည်ပေါက်မယ်။ ကိုယ်က အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း stock exchange ရဲ့ စာရင်းဇယားတွေမှာ နာမည် မပေါက်ဘူး။ နာမည်ပေါက် လိုချင်ကြောင်း တောင်းဆိုလို့တော့ ရတယ်။ဒါက အကြမ်းအားဖြင့် ပြောတာပါ။
ပွဲစား(broker) တွေက အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အမေရိက ဈေးကွက်၊ ဥရောပ ဈေးကွက်၊ အာရှ ဈေးကွက် အတွက် အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ကိုယ်က ဘယ်ဈေးကွက်မှာ စိတ်ဝင်စားသလဲ။ ဘယ်လိုမျိုး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရဲ့ အစုရှယ်ယာတွေကို ဝယ်ပြီး ရင်းနှီးမြုတ်နှံချင်သလဲအပေါ် မူတည်မှာပေါ့။ နောက်ပြီး အစုရှယ်ယာ ဝယ်တယ် ရောင်းတယ်လုပ်တဲ့အခါ ပွဲစားတွေကတဆင့် သွားရတော့ ပွဲစားခ(brokerage)ပေးရတယ်။ ပွဲစားတွေ အမျိုးမျိုး ပွဲစားခ ယူပုံခြင်း မတူကြဘူး။ အများအားဖြင့် ပွဲစားတွေက အွန်လိုင်း၊ ဖုန်းတွေက ကဆင့် အရောင်းအဝယ် လုပ်ပေးကြတယ်။ etrade.com, sharebuilder.com, scottrade.com,.. ဒါတွေဟာ အမေရိက ဈေးကွက်အတွက် ပွဲစားတွေပဲပေါ့။
အစုရှယ်ယာတွေ ဝယ်ယူတော့မယ်၊ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ရင် ဈေးကွက်ကို သေသေချာချာ လေ့လာ နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်။ စိတ်လောစရာမလိုဘူး။ ဈေးကွက်မှာ အစုရှယ်ယာတွေက သန်းနဲ့ချီပြီး ရှိတယ်။ အချိန်မရွေးဝယ်လို့ရတယ်။ stock, mutual funds, options..အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုး ရင်းနှီးမြုတ်နှံလို့ ရတာတွေ ရှိပေမယ့်..အခုတော့ အစုရှယ်ယာ(stock) အကြောင်းပဲ ပြောမယ်။ စာရေးသူအမြင်ကတော့ အစုရှယ်ယာတွေကို ဝယ်ယူရောင်းဝယ် ကြရတာ ဈေးကွက်သီအိုရီ(ဒါက ကျွန်တော် ဖန်တီးတဲ့ စကားအနေနဲ့ ပြောတာပါ) ထုတ်ရတာလို့ မြင်တယ်။ ကိုယ်ထုတ်တဲ့ သီအိုရီမှန်ရင် အကျိုးအမြတ်ရမယ်။ ကိုယ့် သီအိုရီမှားရင် ရှုံးမယ်ပေါ့။ နောက်ပြီး အစုရှယ်ယာမျိုးက ဈေးကွက်မှာ အတက်အကျ သိပ်မြန်ပြီး အလွန်စွန့်စားရတဲ့ အလုပ်မျိုး။ အစုရှယ်ယာတွေရဲ့ Graph မျဉ်းတွေကို ကြည့်ရင် လှိုင်းတွေပဲ။ တက်လိုက်၊ ကျလိုက်နဲ့။ ဂရပ်မျဉ်းတွေက တစ်ဖြောင့်တည်း ဖြည်းဖြည်ခြင်း တက်သွားတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။
စာရေးသူက ကံဆိုတာကို အယုံအကြည်ရှိတဲ့သူမဟုတ်တော့ မြတ်မှာပဲဆိုပြီး ကံစမ်းတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ အစုရှယ်ယာတွေ ဝယ်ယူတာမျိုး မလုပ်ဘူး။ လုပ်ဖို့လည်း အားမပေးဘူး။ စားရေးသူ ကိုယ်တိုင် ဘာလို့ ဒါတွေ လုပ်ရသလဲဆိုတော့ ရှေ့ကပြောခဲ့သလို့ ငယ်ငယ်တုန်းက လေဘေးရောင်းခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်အကြောင်း တီးမိခေါက်မိအောင်၊ မသိသေးတာတွေ သိအောင်၊ နောက်ပြီး ဈေးကွက် သီအိုရီ ထုတ်ကြည့်ချင်လို့။ ဈေးကွက်သီအိုရီ ထုတ်တယ်ဆိုတာ ထွေထွေထူးထူးတော့ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ပေါ်လစီ၊ ဈေးကွက် လမ်းကြောင်း၊ အစရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စုစည်းပြီးတော့ အဲဒါတွေက ကိုယ်ဝယ်ယူလိုတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အစုရှယ်ယာ အတက်အကျကို ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရတာပေါ့။ နောက်ပြီး ကိုယ်ဝယ်ယူလိုတဲ့ ကုမ္ပဏီကလည်း ဘယ်လိုမျိုး တီထွင်မှုအသစ်တွေ ထုတ်လာနိုင်မလဲ၊ တနှစ်စာ ပထမပတ် စာရင်းရှင်းတမ်းတွေမှာ အမြတ်အစွန်းမှရှိရဲ့လား၊ ဝန်ထမ်းတွေ ငှားနေလား၊ လျှော့ချနေလား၊ အမျိုးမျိုးပေါ့။ ယုတ်စွအဆုံး အခုလို ပွင့်လင်းရာသီ နွေဦးမှာ လူတွေ ခရီးထွက်တာ များရင် ဘယ်လိုမျိုး စီးပွားရေးဈေးကွက်တွေမှာ တိုးတက်နိုင်လဲ။ အဲဒီလောက်ထိ တွက်ဆကြည့်ရမှာပေါ့။ ဘက်ပေါင်းစုံ၊ ရှု့ထောင်ပေါင်းစုံကနေကြည့်ပြီး ကိုယ်ရဲ့ သီအိုရီ ကိုယ်ထုတ်၊ ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့ အစုရှယ်ယာကို ဝယ်၊ ရောင်းချင်တဲ့ အချိန်မှာ ပြန်ရောင်း။ ကိုယ့် သီအိုရီမှန်ဖို့ သတင်း အချက်အလက်ဆိုတာ အဓိက အရေးကြီးဆုံးပဲ။
လက်ရှိ ကမ္ဘာရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေကို ကြည့်ကြရအောင်။ နိုင်ငံတကာမှာ စီးပွားရေးတွေကျ၊ လူတွေ အလုပ်တွေပြုတ်၊ အလုပ်ရှိတဲ့ လူကလည်း တထိတ်ထတ်နဲ့ ငါ ဘယ်တော့ အလုပ်ဖြုတ်ခံရမလဲလို့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးက အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေ(great depression) ကိုတော့ ဖြတ်ကျော်ပြီးသွားပြီလို့ ဆိုရမယ်။ ဟိုး..အောက်ဆုံး အဆင့်ကို ရောက်သွားခဲ့တဲ့ အစုရှယ်ယာတွေရဲ့ တန်ဖိုးတွေဟာလည်း လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ ပြန်တက်လာပြီ။ ဆိုတော့ကား..ဒီအချိန်ဟာ အစုရှယ်ယာတွေ ဝယ်ပြီး ရင်းနှီးမြုတ်နှံလို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ပဲလို့ ပြောရမှာပဲ။ စာရေးသူလို ခေါင်းအရှုပ်ခံပြီး တွက်ချက် ရောင်းဝယ် မနေပဲ၊ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အစုရှယ်ယာတွေကို ဝယ်ထားလိုက်ရင် အရှည်မှာ အသေအချာ အမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်တာပေါ့။ ဗဟုသုတရဖို့၊ အတွေအကြုံရဖို့ အလို့ငှာ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း ငါးရာဖိုးဖြစ်စေ၊ တစ်ထောင်ဖိုးဖြစ်စေ စမ်းကြည်ပေါ့။
မိုက်ကရိုဆော့လို ကုမ္ပဏီမျိုးက ဟိုအရင်တုန်းက အစုရှယ်တစ်ခုကို ၃၀-ဒေါ်လာ လောက်ရှိခဲ့ပေမယ့် ၁၅-ဒေါ်လာ အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်။ အခုချိန်မှာ ပြန်တက်လာတယ်ဆိုတော့ အကြမ်းဖျင်း အစုရှယ်ယာ တစ်ခုတန်ဖိုး ၂၀-ဒေါ်လာ ပြန်ဖြစ်လာပြီ။ စီးတီဂရု(Citi Group Bank) ဆိုရင် အစုရှယ်ယာ တစ်ခုတန်ဖိုး ၂၃-ဒေါ်လာခွဲလောက်ကနေ ၉၇-ပြား အထိ ထိုးဆင်းသွားခဲ့တာ အခုဆိုရင် အစုရှယ်ယာ တစ်ခုတန်ဖိုး ၄-ဒေါ်လာလောက် ပြန်ဖြစ်လာပြီ။ ရာဟူး(Yahoo) ဆိုရင် ၂၈-ဒေါ်လာကနေ ၉-ဒေါ်လာ လောက်အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်။ အခု ၁၄-ဒေါ်လာ၊ ၁၅-ဒေါ်လာ ဝန်းကျင် ပြန်ဖြစ်လာပြီ။ ဆိုလိုတာက စီးပွားရေး ပြန်လည် ဦးမော့လာခဲ့ရင် ဒီအစုရှယ်ယာတန်ဖိုးတွေလည်း တရိတ်ရိတ်နဲ့ ပြန်လည် တက်လာရမှာပေါ့။
ဒီနေ့တော့ ဒါလောက်ပဲ တော်သေးပြီ။
လူ့လောကတွင် အဖြစ်အပျက်ပေါင်းမြောက်မြားစွာတို့ မျက်တောင်တစ်မှိတ်၊ လျှပ်တပျက် တဒင်္ဂခဏ အခိုက်အတန့်ကာလအတွင်း သိန်းသောင်းချီကာ ဖြစ်ပျက်ကြသည်။အနန္တနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှရသော ဤလောကကြီး၏ အဖြစ်အပျက်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်သေးနုပ်သော မြှုမှုန်ကလေးမျှသာဖြစ်သည်။ လောကအချိန်ကာလ ယန္တတရားပေါ်မှ ကျွန်ုပ်တို့ ဖြတ်သန်းကြသည့် အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖြစ်အပျက်တို့သည် သူလိုငါလို့ သာမန်မျှသာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်ယန္တရား၏ လှည့်စားရာသို့ ပါဝင်စီးမျောကာ မိမိတို့၏ ဖြစ်တည်ရာ ဘဝကို သူ့အလိုလိုဖြစ်ပျက်ကြသည်ဟု ယူဆနေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကံ၏စေမံရာ၊ သို့တည်မဟုတ် ဘုရားသခင်၏ ဖန်တီးရာ အဖြစ်သို့ တာဝန်တွေပေး ပုံအပ်ထားကြရင်း ကိုယ်လွတ်ရုံးကြရသည်။ မနက်မိုးလင်းလို့ အိပ်ရာထက်မှာ မှိန်းနေစဉ် နေ့စဉ်ကြားရသော ကျီးအာသံတို့သည် သာမန်မျှသာ ဖြစ်သည်ဟု လူတို့၏ မသိစိတ်မှ အလိုလို လျစ်လျူရှု တုံ့ပြန်ကြသည်။ ထိုမှတဖန် မနက်အလုပ်ခွင်သို့ အမှီ အပြေးအလွားသွားစဉ် လမ်းဘေးတွင် တွေ့ရသော အဘွားအိုတစ်ယောက်နှင့်မြေကလေးအရွယ် ကလေးမတို့ မြေတွင်ဝတ်တွားခယ တောင်းရမ်းစားသောက်နေသည်ကို တွေ့ရသောအခါ ထိုကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်မျိုး မြင်တွေ့ရဖန်များတော့ မထူးဆန်းတော့ဟု ယူဆကြပြန်သည်။ ညလူခြေတိတ်သည့်အခါ မိန်းကလေးငယ်တို့ အလှတို့ပျက်ပြယ်ကာ တိတ်တခိုးမျက်ရည်တို့ဖြင့် ပူပြင်းသောဘဝလမ်းကို နင်းလျှောက်ကြသည်ကို သိကြလျက်နှင့် မြေနှိမ့်ရာ လှံစိုက်ကြသည်။ ကျပ်တည်းလားသော စာဝတ်နေရေး နှင့် စီးပွားရေး၊ အာဏာနှင့် ဥစ္စာဓနတို့၏ အုပ်စိုးမှုအောက်တွင် နလံမထူနိုင်သော ဥပဒေတို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူ့ဘဝသည် မီးလောင်ကျွမ်းလျက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးလာခြင်းတို့၏ သားကောင်တို့ မြေသို့ချနင်း ဖျက်ဆီးခံကြရသည်။
အကယ်ဤသာ အကြင်သူတစ်ပါးသည် လူ့လောက ကမ္ဘာမှလွန်မြောက်ကာ ဒြပ်မဲ့သောဖြစ်တည်ရာ အရပ်မှ ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်ကြည့်ပါက စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်းနှင့် အကြောက်တရားတို့ အစဉ်ဖုံးလွှမ်းနေသော ဘဝဖြစ်စဉ်တို့သည် လူတိုင်း လူတိုင်းဘဝတွင် နေစဉ်ထင်ဟပ်နေလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပေလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့ အပျက်တရား နှင့် ယိုယွင်းပျက်ဆီးခြင်းကို ဆောင်သော နိမိတ်တို့သည် အချိန်ကာလကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ အရိုးစွဲသလို့ မထူးဆန်းသော အရာတစ်ခုလို ထင်မှတ်မှားမိကြပေလိမ့်မည်။သို့သော် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်းတို့သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုခြင်းဆိုသော မြော်လင့်ချက်အသွင်ကူးပြောင်းလျက်၊ အကြောက်တရားတို့ နယ်နိမိတ်ကုန် ရပ်တန့်ကုန်ဆုံးကာ ပုန်ကန်ထကြွရတတ်သည်။ စတေးလိုက်ရသော အသက်သွေးများ၊ မျက်ရည်များ၊ နာကျည်းချက်များ.စသည်တို့သည် ချိန်ကိုက်ဗုံးသဖွယ် လှုပ်တုတ်လှုပ်တုတ်နှင့် တစ်စတစ်စကြီးထွားလာကာ စနက်တံသည့် မည်သည့်အချိန်တွင် ပေါက်ကွဲမည်ကို ကြည့်ရှုနေရသလိုပင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာယ ခွန်အားဗလ အရာတွင်၎င်း၊ အတတ်ပညာ အသိပညာ ဥာဏဗလ အရာတွင်၎င်း အလွန်တရာထူးကဲပြောင်မြောက်သော လူသားများအဖြစ်မွေးဖွားလာကြရသည်မဟုတ်။ သို့တည်းမဟုတ် လူပေါ်လူဇော် ဖြစ်ဖို့အတွက် စနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင် မြေတောင်မြောက်ပေးခံရသည့် အခွင့်၊ ဆည်းပူးလေ့လာသုံးသပ်ခွင့်တို့ မရရှိခဲ့ကြရသည့် အားလျော်စွာ လူ့ဘိတ်ချေးများ ဖြစ်လာကြရသည်။ ထိုလူ့ဘိတ်ချေးမှ မွေးဖွားသည့် သားသမီးများလည်း ထို့အတိုင်း အခွင့်အရေးတွေ ဆက်လက်ဆုံးရှုံးနေသေးသမျှ လူ့ဘိတ်ချေးများ ဖြစ်နေကြရအုံးမည်။ လူ့ဘိတ်ချေးဆိုသည်မှာ မိမိတို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင် အကဲဖြတ် ချိန်ထိုးကြည့်မည့် အရာများ၊ အကြောင်းတရားများ မရှိသ၍ နွားချေရာခွက်ထဲမှ ဖားသူငယ်ပမာ မိမိတို့သည်သာ အကောင်းဆုံးပမာ ထင်မှတ်မှားကြသည်။ ဘောင်ခတ်ခံထားရသော ဘဝထဲတွင် မိမိတို့၏ ဘဝအဖြစ်အပျက်တို့သည် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟု ထင်မှတ်မှားလျက် အကြောင်းအားလျော်စွာ နွားချေရာခွက်ထဲမှ ခုန်ထွက်ကြည့်သည့် အခိုက်တွင်မှ မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူးဖြစ်ကြလျက် မိမိတို့ မသိလိုက် မသိဘာသာ ဖြတ်သန်းနေရသော ဘဝတို့ကို ပြန်လည် ဝေဖန်ဆန်းစစ်ကြသည်။ ငါတို့ဘဝတွေဟာ လှောင်အိမ်ထဲက ငှက်တွေလို အပြင်လောကနဲ့ အဆက်ဖြတ် ပိတ်လှောင်ခံထားရပါလားဆိုတာကို သိလာကြရတယ်။ ဝေဖန်ဆန်းစစ်နိုင်စွမ်းသော အသိပညာ တို့ကို အလျက်အမြန် ဖြည့်တင်းကြလျက် ကျွန်ုပ်တို့ နေစဉ်မြင်တွေ့နေကြရသော စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်းနှင့် အကြောက်တရားတို့ဖုံးလွှမ်းနေသော ဘဝ ကန့်လာကာနောက်ကွယ်မှ အကြောင်းတရားတို့ကို မြင်အောင် ကြည့်လာကြသည်။ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ကြသည်။ အကြောင်းတရားကို သုံးသပ်သည်။ အရင်းအမြင်ကို ရေဆုံးမြေဆုံးလိုက်ကြည့်သည်။ လူအနည်းစုကွက်ကွက်လေးကို မြင်တွေ့ ကြားသိနေရသည့်ဘဝမှ ကျော်လွန်ကာ လူအများစု အတိုင်းအတာဖြင့် ချိန်ထိုးတွက်ဆလာကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘဝတွေ ဘာအတွက်ကြောင့် ဆင်းရဲကြရသလဲ၊ ဒါဟာ ပုံမှန်မှဟုတ်ရဲ့လား၊ လူချင်းတူလျက်နဲ့ ငါတို့လူမျိုးတွေအတွက် လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ ဘာတွေဆုံးရှုံးနေကြရသလဲ အစရှိတဲ့ မေးခွန်းများမေးလာကာ အဖြေရှာကြသည်။
မောင်သန်းအေးဆိုသူသည် အထက်က ဖေါ်ပြလတ္တံ့သော လူ့ဘိတ်ချေးတစ်ယောက်ဖြစ်ကာ ထိုဘဝမှ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားသော လူဇော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်လေသည်။သူကို သိကျွမ်းရစဉ်က လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်ခန့်က ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် အထက်မြန်မာပြည် မန္တလေးသို့ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုဖြင့် ရောက်သွားသည့် အခိုက် ဈေးချို ရုံတော်ကြီးရှိ ကုန်သည်ပွဲစား သူငယ်ချင်း ကိုကျော်နိုင် ဆိုသူ၏ နေအိမ်တွင် တည်းခိုနေစဉ် ထိုပွဲရုံအိမ်သို့ နေ့စဉ်ကုန်တင် ကုန်ချ ကူလီအလုပ် လုပ်နေသော မောင်သန်းအေးကို စတင်သိကျွမ်းခဲ့ရသည်။
မန္တလေးသို့ ဆိုက်ရောက်သည့် အချိန်၌ ညဖြစ်သည်က တစ်ကြောင်း၊ ခရီးကလည်း ပန်းလာကာ အိပ်ချင်နေသည့်အပြင် ညအချိန် သူငယ်ချင်း၏ ပွဲရုံအိမ်သည် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်ထားသောကြောင့် မန္တလေး ရုံတော်ကြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို သေချာ စုံငှအောင် သတိမထားမိခဲ့ချေ။ နောက်တနေ့ မိုးလင်၍ ကားဟွန်းသံများ၊ မော်တော်ကား၊ ဆိုင်ကယ် သံများ နှင့်အတူ ဈေးသည် ဈေးဝယ်တို့၏ အသံစုံများကို ကြားရတော့မှ အိပ်ရာထဲတွင် ဆက်လက် အိပ်စက်ခြင်း လုံးဝမတတ်နိုင်တော့သည့် အခါ၊ လေးတွဲသော မျက်လုံးကို ဖွင့်လျက် မန္တလေးမြို့ ဈေးချိုရုံတော်ကြီးကို စူးစမ်းလေ့လာဖို့ နိုးထခဲ့ရသည်။
ကျွန်ုပ် အိပ်ရာမှ နိုးနှင့် နေသည်ကို သိသည်နှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကျော်နိုင်က မနက်စာ စားဖို့ လာခေါ်သည်။
“ဘကောင်းရေ….မနက်စာ စားဖို့ သွားကြရအောင်ဟေ့..”
“ဟ..မနက်စာ အိမ်မှာ မစားကြဘူးလား”
“ငါတို့လို စီးပွားရေးသမားတွေကတော့ မနက်စာကို အပြင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပဲ စားကြတယ်ကွ။ ဆိုင်မှာက လူစုံတော့ မနက်စာလည်းစား အလုပ်ကိစ္စလည်း ပြောရင်းဆိုရင်းပေါ့ကွာ။”
“အေးဟ..ငါလည်း မန္တလေးက ခွဲသွားတာ ကြာပြီဆိုတော့…မင်းတို့ အထာတွေ ငါလည်း မသိတော့ဘူး.. မင်းစီစဉ်တာပဲ လိုက်နာရတော့မှာပဲ ”
ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်လည်း မန္တလေးမြိုး၏ နံနက်ခင်း မနက်စာကို အပြင်ထွက် စားရန် အဝတ်လဲပြင်ဆင်ပြီး ကျော်နိုင်တို့ ပွဲရုံအိမ်ရှေ့သို့ ထွက်လိုက်သည်တွင် ပျားအုံတစ်အုံကို ပတ်ပတ်လည် ခြံရံလျက် ဝင်ချည် ထွက်ချည်ဖြင့် တစ်ဝှီဝှီအော်မြည်နေကြသော ပျားများကို တွေ့လိုက်ရသလို လူပေါင်းစုံတို့ ဟိုတစ်ဆိုင်ဝင်၊ ဒီတစ်ဆိုင်ထွက်ဖြင့် ဈေးချိုရုံတော်ကြီးဆိုသော ပျားအုံကြီးကို အုံဖွဲ့အမှီပြုနေကြသည်ကို တွေ့ရတော့သည်။
“အစ်ကိုက ရန်ကုန်က လာတာလား”
ရုတ်တရက် မေးခွန်းမေးသံနှင့်အတူ စွတ်ကျယ်လက်ပြတ် အမြဲဝတ်သောကြောင့် နေလောင်ထားသည့် လက္ခ ဏာရှိသည့် မွဲပြာရောင် အသားအရည် နှင့် ရည်ရည်မွန်မွန် လူငယ်တစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
“ကျွန်တော်နာမည်က မောင်သန်းအေးပါ။ ကိုကျော်နိုင်တို့ဆီမှာ ကူလီလုပ်ပါတယ်”
ပစ္စည်းအတင်အချ ကုန်ထမ်း ကူလီလုပ်တာကို ကူလီလုပ်ပါတယ်ဟု ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရိုးရိုးသားသားဖြင့် ပြောဆိုကာ မိတ်ဆက်လာသော မောင်သန်းအေးဆိုသည့် အသက် အစိတ်အရွယ် လူရွယ်ကလေးကို ကြည့်ကာ ရိုးသားမည့်ပုံပဲဟု စိတ်ထဲမှ ကြိတ်ပြီး ကောက်ချက်ချမိသည်။ တော်တန်ရုံ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်ချက် အားနည်းသူတို့သည့် တစ်ပါးသူ လူစိမ်းတို့နှင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ကြသည့်အခါ မိမိတို့ တော်ကြောင်း၊ တတ်ကြောင်း တို့ကို သာသာထိုးထိုး အလေးပေးပြောလျက် တဖက်သားမှ အထင်ကြီးစေရန် အလို့ငှာ ကြိုးစားဟန်ဆောင် အားထုတ်ကြလေ့ရှိသည်။ မိမိတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသည့် လုပ်ငန်းသည့် သေးနုတ်နေသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် တိုင်အောင် အဆင်ပြေချောမွေ့ လှပသော စကားလုံးတို့ သုံးလျက် ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်သောနည်းဖြင့် နားဝင်ချိုအောင် လှည့်ပတ်ပြောဆိုတတ်လေ့ရှိသည်။ မောင်သန်းအေးသည်ကာ ကျွန်ုပ်ကို လာရောက် မိတ်ဆက်သည့် အခါတွင် သူသည်ကူလီလုပ်ကြောင်း တဲ့ထိုးကြီး ပြောသည့်အချက်အပေါ် ကျွန်ုပ် သဘောကျမိသည်။ သူသည် အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထောဆိုသည့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားသူ အမျိုးအစားထဲမှ တစ်ယောက်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းမိသည်။
“အေး..ရန်ကုန်က လာတာ ဆိုကြပါစို့..တကယ်တော့ အစ်ကိုလည်း မန္တလေးမှာမွေး မန္တလေးမှာကြီးခဲ့တဲ့ သူ တစ်ယောက်ပဲ”
“ဟုတ်လား..ကောင်းတာပေါ့ အစ်ကိုယ်ရ။ အရင်တုန်းက ကိုကျော်နိုင်ဆီကို ရန်ကုန်က သူ့ရဲ့ စီးပွားဖက် ဧည့်သည်နဲ့ သားတစ်ယောက် လာလည်ဖူးတယ်…အဲဒီ ဧည်သည်ရဲ့ သား ရန်ကုန်သား ပြောတဲ့ စကားတွေ ကျွန်တော် နားကိုမလည်ဘူး။ ဘာတဲ့..သူတစ်ခုခု နားမလည်ဘူးဆိုရင်…မင်းတို့ဟာတွေက အစားကြီးပဲ လို့ ပြောတယ်. အဲဒါ ကျွန်တော်တို့က လာလဲ အစားကြီး ဆိုတာလို့ မေးတော့..သူကဘာပြန်ပြောသလဲဆိုတော့..သူပိုပြီး စားသွားပြီတဲ့…..ကျွန်တော်တော့ အဲဒီလိုမျိုး ရန်ကုန်ကလူတွေပြောတဲ့ ဘန်းစကားတွေ မကြိုက်ပေါင်ဗျာ”
တွေ့တွေ့ခြင်း စိတ်လိုလက်ရ စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် မိမိအကြိုက်၊ ခံစားချက်တို့ကို ဖွင့်ဟ ထုတ်ဖေါ်ပြောပြသော မောင်သန်းအေးစကားကို ကျွန်ုပ် ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရီမောမိသည်။
“ဟား…ဟား….ဟား…..မောင်သန်းအေးပြောတာ အစ်ကို နားလည်တယ်..တစ်ကျောင်း တစ်ဂါထာ၊ တစ်ရွာ တစ်ပုဒ်ဆန်း ဆိုသလိုပေါ့ကွာ..နောက်ပြီး ဘာသာစကားဆိုတာ ပြောင်းလဲနေတဲ့ သဘောတရားလဲရှိတယ်ကွ.”
“ဒါတော့ ဒါပေါ့ အစ်ကိုရာ. ဒါပေမယ့် အဓိပ္ပာယ် နှစ်မျိုး သုံးမျိုးနဲ့ ဝိဟာရ မကွဲတဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုံးတွေကြတော့ လူတိုင်းစေ့ နားမလည်နိုင်တော့ ဘူးပေါ့”
မောင်သန်းအေး စကားကြောင့် ရီမောနေတဲ့ ကျွန်ုပ် အတွေးထဲ လျှပ်စီးလက်သလို ဖြတ်ကနဲ ရန်ကုန် ရောက်ခါစ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဒေသသုံး စကားအပြောင်းအလဲတွေကို သတိရမိတယ်။ ကြက်သွန်အချဉ် နှင့် မုန့်တီကြိုက်တဲ့ မန္တလေးသား ကျွန်ုပ်အတွက် ရန်ကုန်မှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် နန်းကြီးသုပ်ကို မှာစားတော့ ကြက်ဥပြုတ်များ လှီးပြီး သုပ်သော နန်းကြီးသုပ်နှင့် သခွါးသီးကို ကြက်သွန်အစား အချဉ်အဖြစ်သုံးသည်ကို ထူးဆန်းစွာ မြင်တွေ့ဖူးခဲ့သည်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘဝ အဆောင်နေစဉ် လှည်းတန်းဈေးမှာ ဈေးဝယ်တော့လည်း ခါကြက်ဥဆိုတာကို နားမလည်ကြ။ မုန်းလာဥအနီဟု ပြောမှ ဈေးသည်များ နားလည်ကြသည်။ ကြာတော့လည်း နယ်ပေါင်းစုံ၊ ဒေသပေါင်းစုံမှာ အသုံးအနှုန်းများ၊ လေယူလေသိမ်းများကို ကျက်မိသွားသည်။
သို့ပေသည့် အခုလို ကုန်းထမ်းသမား မောင်သန်းအေးဆိုသူ လူငယ်တစ်ယောက်ထံမှ မြန်မာစကားအပေါ် ထားရှိသော သူ၏ အယူအဆကြားရတော့ ကျွန်ုပ်၏ စိတ်အာရုံကို ခေါင်းလောင်းတီးသလို သူ့အကြောင်း ပိုမိုသိချင်စိတ် ပြင်းပြလာသည်။ သူသည် စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု အတွေးအခေါ်တို့နှင့် အလှမ်းမဝေး မစိမ်းလှသော လူငယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းမိသည်။ မွဲပြာရောင် အသားအရည်နှင့် ကုန်ထမ်းရလွန်း၍ ကုန်းထနေသော ပုခုံးဂုတ်ပိုးသားတို့ဖြင့် ဤလူငယ်တစ်ယောက်သည် နုညံ့ယဉ်ကျေးသော စာပေ အတွေးအခေါ်တို့ကို ထမ်းပိုးထားလေသည်။
“မောင်သန်းအေး..အစ်ကိုနဲ့ ကျော်နိုင်က မနက်စာ အပြင်သွားကြမလို….မောင်သန်းအေးပါ လိုက်ခဲ့စေချင်တယ်။ စကားစမြည်လည်း ပြောကြရတာပေါ့”
ဝန်ထမ်း အလုပ်သမားအားလုံးကို သူငယ်ချင်းကဲ့သို့ ပြောဆိုဆက်ဆံလေ့ရှိသော သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကျော်နိုင်သည် သူ၏ ဂျစ်ကား အစုတ်ကလေးဖြင့် မနက်စာ အပြင်သွားစားဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်လေသည်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွာရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို တစ်ယောက်တည်း ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြု၌ အလုပ်သမားများနှင့် ရင်နှီးစွာ ဆက်ဆံတတ်သော သူ၏စီမံခန့်ခွဲတတ်မှုသည် အကျိုးရှိသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုပင်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာ သူ၏ ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် လွတ်လပ်သည့် အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဖိတ်ခေါ်မှုကို ကျော်နိုင်သည် ကန့်ကွက်ခြင်း မရှိ လိုလိုလားလား ရှိသလို၊ မောင်သန်းအေးကိုယ်၌လည်း စိတ်ပါလက်ပါဖြင့် လွယ်လင့်တကူ ခေါင်းငြိမ့်သည်။
ကျော်နိုင် မောင်းသော ဂျစ်ကားဟောင်း အစုတ်ကလေးကို ကျွန်ုပ်က ရှေ့တွင် ထိုင်လျက်၊ မောင်သန်းအေးက နောက်တွင် ထိုင်ကာ မန္တလေးမြို့၏ မနက်စာကို စားကြမည်ဟု အားခဲလျက် သုံးယောက်သား မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် စကားပြောကြရင်း ရုံတော်ကြီး မှ ထွက်ခဲ့ကြသည်။ မနက်ခင်း လို့သာ ဆိုပေသည့် ကျွန်ုပ်တို့ ထွက်လာခဲ့သည် အချိန်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ကိုးနာရီခွဲပြီးသွားလို့ ဆယ်နာရီ ထိုးလုထိုခင် ရှိလှပြီ။ မန္တလေးမြို့၏ နံနက်ခင်း ဆယ်နာရီ နေသည် မွန့်တည့် နေ တမျှ ပူစပ်ပူလောင် ရှိလှသည်။စက်ဘီးများလည်း လမ်းမကြီးများ အတိုင်း ဥဒဟို ဖြတ်သန်းသွားလာကြသည်။ စက်ဘီးစီးသူများသည် တစ်ခါတစ်ရံ မော်တော်ကားသွားနေသည့် လမ်းမအလယ်သို့် ရိမ်းလာတတ်သည့်အတွက် မော်တော်ကား ဟွန်းသံကို အလျင်းသင့်လျှင် သင့်လို တစ်တီတီမြည်အောင် တီးကြရသည်။ သို့ရာတွင် မန္တလေးမြို့၏ လမ်းစည်းကမ်းသည် သူ့အထာနှင့်သူ။ စက်ဘီးများ စက်ဘီးနိုင် အစုလိုက် အပြုံလိုက် လမ်းဖြတ်ကူးကြသည်။
စက်ဘီးများ၊ ဆိုင်ကယ်များ၊ မော်တော်ကားများ လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ရပ်ထားကြလျက် လူတော်တော်များဖြင့် စည်းစည်းကားကားရှိလှသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့သို့ ကျော်နိုင်၏ ဂျစ်ကားကို ရပ်လိုက်တော့မှ မင်းသီဟ ဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို စတင်တွေ့ရတော့သည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လို့ ဆိုပေသည့် လက်ဖက်ရည် ကော်ဖီသာ ရောင်းသည် မဟုတ်။ ပလာတာ၊ ထပ်တစ်ရာ၊ မုန့်တီ၊ ခေါက်ဆွဲ၊ မြီးရှည်၊ စမူဆာ၊ ပေါက်ဆီ အစရှိသည်တို့ အစုံရသည်။
ကျော်နိုင် နှင့် မောင်သန်းအေးတို့က မုန့်တီကို အမဲအကျောနှင့် မှာစားသည်။ ကျွန်ုပ်က ထပ်တစ်ရာ ကျွပ်ကျွပ်ကို ပဲနှင့် စားလိုသည့် အာသီသ ရှိသည်နှင့် ပဲ ထပ်တစ်ရာကို မှာစားသည်။ ထို့ နောက် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ မန္တလေးမြို့ နံနက်ခင်း စကားဝိုင်းကို စတင်ကြသည်တွင် ကျွန်ုပ်ကပဲ မောင်သန်းအေး အကြောင်းကို အများဆုံးမေးဖြစ်သည်။ သူသည် မိဘများ မရှိ။ ဆွေမျိုးညာတိ မောင်နှမသားချင်းများလည်း မရှိ။ တစ်ကိုယ်ရည် တစ်ကာယ ဘဝကို တစ်စတစ်စ တိုးတက်အောင် ပြုပြင် ပြောင်လဲ ကြိုးစားနေသော လူငယ်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သည်ကို လေ့လာရသည်။
ထိုစဉ်က ပြောပြသော မောင်သန်းအေး၏ ဘဝဇာတ်စုံကို ဟိုတစ်စ၊ ဒီတစ်စ စကားပြောသလို ဖြစ်မနေစေရန် အလို့ငှာ ကာယကံရှင်မောင်သန်းအေး၏ တောင်ဆိုချက်အတိုင်း အောက်ပါအတိုင်း ဝတ္တုဆန်ဆန် ရေးသားပြလိုက်ပါသည်။
မန္တလေးမှ စစ်ကိုင်းကို အသွား အဝ(အင်းဝ)သို့ ခွဲထွက်သွားသည့် လမ်းမဆုံတွင် အင်းဝစစ်ကိုင်း ကားဂိတ်ရှိသည်။ ထိုကားဂိတ်တွင် ခရီးသည်တင် ဒတ်ဆန်းကားများ၊ ဟိုင်းလတ်ကားများ ခရီးတစ်ထောက် ရပ်နားကာ ကုန်တင် ကုန်ချလုပ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ခရီးသည်များ ပေါင်းစုံမိသည့် အချိန်ကို ရနိုင်သလောက် အလုအယက် ဈေးရောင်းကြသော ဒုတ်ထိုးအချဉ်သည်များ၊ ငုံးဥပြုတ်ရောင်းကြသူများ၊ အစရှိသဖြင့် ယောက်ယက်ခတ်လျက် ရှိတတ်သည်။ လွန်ခဲ့သော အနှစ် နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ် ဝန်ကျင်ခန့်က ထို အင်းဝစစ်ကိုင်း ကားဂိတ်တွင် ဝါးပိုးဝါးအဆစ် အလုံး ကြီးကြီး နှစ်လုံးကို လက်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ကိုယ်စီကိုင်ကာ လူစည်ကားသည့်် အခိုက်အတန့်ကို စောင့်လျက် တောင်းရမ်းလျက်ရှိသည့် သူဖုန်းစား သားအမိ နှစ်ယောက်ကို တွေ့ဖူး သတိပြုမိသူများ ရှိကောင်း ရှိကြလိမ့်မည်။
အစာ အဟာရ ချိုတဲ့ကာ လောကဓံ အထုအထောင်းကို နှစ်ရှည်လများ ခံစားနေရသော ကြောင့် မွဲပိန်ခြောက်သွေ့နေသော အသားအရည် ခန္ဓာကိုယ်ရှိသည့် မိခင်ဖြစ်သူ၏ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်သည် လိုအပ်သည်ထက် ပိုမို ရင့်ရော် အိုမင်းနေသည့် အသွင်အပြင်ရှိသည်။ အသားအရည် မည်းမည်း ခြောက်ခြောက် မျက်နှာတွင် ချေးအလိတ်လိတ် ကပ်ကာ ဘောင်းဘီတို ညစ်ညစ်နွမ်းနွမ်းကိုသာ ဝတ်ထားသည့် ခုနစ်နှစ်အရွယ် ကောင်လေးသည် မိခင်ဖြစ်သူ၏ နံဘေးတွင် ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်လျက် တွေ့သမျှ လူအားလုံးကို စူးစမ်းလေ့လာနေဆဲ။ သူ၏ အသွင်သဏ္ဍာန်သည် အမြဲဆာလောင်မွတ်သိပ်နေမှန်း သိသာလှသည်။ တောင်းရမ်းစားသောက်ရသည့် ဘဝဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မိခင်ဖြစ်သူ၏ ဦးခေါင်းသည် အရာရာကို အမြဲ ဦးညွတ် နေလေ့ရှိသည်။ ဂရုတစိုက်နှင့် သတိထားကြည့်မိလျင် တစ်ခါတစ်ရံမှသာ မော့်ကြည့်သော သူမ၏ မျက်လုံးတို့သည် ခံစားချက် ဗလာနတ္ထိ၊ မှုန်မှိုင်းအားနည်းနေသော မျက်ဝန်းအိမ်တို့သည် အလွယ်တကူကျိုးလွယ် ပဲ့လွယ်သော ဖန်သားလွာ ပါးပါးလျှပ်လျှပ် တစ်ခုကဲ့သို့ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုကို စောင့်စားနေရသလိုရှိလှသည်။
ကတ္တရာလမ်းဘေးတွင် သားအမိနှစ်ယောက် ဆောင့်ကြောင့်ထိုက်လျက် တွန့်လိန် ပိန်ရှုံ့နေသော ဒန်ခွက်ကလေးကို သူဖုန်းစားခွက်အဖြစ် ရှေ့တွင်ချကာ မြေပြင်တွင် ဝါလုံးကြီးများကို စည်းချက်ကျကျ ဒေါင်လိုက် ဆောင့်ကာဆောင့်ကာဖြင့် ဝါးလုံးလှိုင်သံထွက်အောင် တီးကျသည်။ အမေဖြစ်သူသည် ပိုမိုကြီးသော ဝါးဆစ်ကို သုံးလျက် သားဖြစ်သူ ကလေးငယ်သည် အတော်အတန် သေးငယ်သော ဝါးဆစ်ဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အညီ စီးဝါးကိုက် အဝင်အထွက်မှန်အောင် တီးသည်။ ထို့နောက် ထိုကောင်လေးကပင် ဆွဲဆွဲငင်ငင်ရှိလှသော အသံဖြင့် ထိုအချိန်အခါက ခေတ်စားသော ပေါ်ပင် သီချင်းတို့ကို သီဆိုလျက် ကားဂိတ်တွင် ခရီးတစ်ထောက်နားသူတို့ကို ကြိုးစား ဆွဲဆောင်လေ့ရှိသည်။ ထိုကောင်လေးသည် နောင်အခါ ကျွန်ုပ်၏ သူငယ်ချင်း ကျော်နိုင်၏ ပွဲရုံတွင် ကူလီလုပ်လျက် မြန်မာစကားကို ဠာန် ဌာန်ကရိုဏ်းကျကျ ပြောဆို ဆက်ဆံတတ်သော မောင်သန်းအေးပင် ဖြစ်သည်။